नेपाल अदक्ष कामदार बेच्ने देश हो र ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
बैशाख २६, २०७५ बुधबार १२:५३:२९ | मेरो कथा मेरो भोगाई
नरेश लामिछाने, अर्जुनधारा नगरपालिका –७, झापा/हाल युएई
म १० वर्षदेखि एउटा पाँच तारे होटलमा सिसि टिभी सिस्टम कट्रोलर र सेक्युरिटी इञ्चार्जका रुपमा काम गर्दैै छु ।
नेपालीको रोजगारीलाई हेर्दा नेपाल चाहिँ अदक्ष कामदार निर्यात गर्ने देश जस्तै भयो । नेपालबाट हेल्पर भनेर पठाउने गरिएको छ । तर उसलाई हेल्पर भनेको के हो अनि उसले के काम गर्नुपर्छ भनेर थाहा हुँदैन । कसैले यो ट्रेड उ ट्रेड भनेर पठाइदिएको छ ।
ट्रेड भनेको के हो अनि कुन ट्रेड वालाले के काम गर्नुपर्ने हो केही जानकारी दिइएको हुँदैन । धेरैलाई सप्लाई कम्पनीमा पठाइएको हुन्छ । उनीहरुलाई नेपालमा राम्रो काम मात्रै होइन कमाइ पनि राम्रै हुन्छ भनेर लोभ देखाइएको हुन्छ । तर सप्लाई कम्पनीमा आएपछि काम र कमाई होइन बसाईकै टुङ्गो हुँदैन ।
भनेको काम र दाम पाउनु त टाढैको कुरा । यसरी केही नबुझाइ अनि केही नसिकाइ कामदार पठाइ रहँदा हाम्रो देश अदक्ष कामदार निर्यात गर्ने देश जस्तै भएको छ । के ययार्थ यही हो ? यदी होइन भने यसमा खै त सरकार, म्यानपावर व्यवसायी अनि एजेण्टहरु सचेत र जिम्मेवार भएको ?
हुन त मेनपावर व्यवसायी र एजेण्टलाई अरुले दलाल पनि भनेको सुन्छु । तर म उहाँहरुलाई त्यो शब्द चाहिँ प्रयोग गर्दिन । किनकी उनीहरुले पनि वेरोजगार युवा जसले नेपालमा कुनै पनि अवसर नपाएर वा नदेखेर काम खोजिरहेका हुन्छन् । उनीहरुलाई काम दिइरहेका होलान् ।
खाडीका देशमा आउने नेपालीहरु आफूसँग धेरै सम्पत्ति भएर आएका पक्कै होइनन् । उनीहरु श्रमको अवसर खोज्दै आफ्नो सम्पत्ति धितोमा राखेर वा ऋण लिएर आएका हुन्छन् । पैसा थियो भने उनीहरु पनि लाखौं खर्च गरेर युरोप,अमेरिका अनि अष्ट्रेलिया जस्ता देशतिर गई हाल्थे होला नी ।
विशेष गरेर खाडी मुलुकमा आफ्नो युवा जोस,जाँगर र स्वास्थ उमेरलाई अव्यवस्थित श्रम बजारमा बेच्न बाध्य उनीहरु जस्ता धेरै नेपालीहरु पनि त नेपालकै नागरिक हुन् ।
त्यसैले उनीहरुका बारेमा र उनीहरु जस्ता धेरै नेपालीलाई झुटको खेती गरेर विदेश पठाउने एजेन्ट या वयसायीहरुको बारेमा सरकारले सुक्ष्म रुपमा अध्यान गरेर विशेष ध्यान दिनु पर्यो । उनीहरुलाई एजेण्ट र म्यानपावरले पठाएका हुन् तर ढाँटेर पठाउने म्यानपावरलाई त मानव बेचबिखनको मुद्दा लगाएर सरकारले कारवाही गर्न सक्छ ।
हुन त विदेशमा कहिले काहिँ भाग्यले पनि साथ दिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ । तर भाग्य भनेर डोकोमा दूध दोएर हुँदैन भने जस्तै हो । त्यसैले पठाउँदा नै दक्ष कामदार पठाउनुपर्छ ।
यस्ता कामदार पठाउन सकियो भने मात्रै उनीहरुले यहाँ राम्रो अवसर पाउन सक्छन नत्र भने नेपालीहरु समस्यामा पर्ने क्रम रोकिँदैन । अहिले जुनसुकै कम्पनीमा अनुभवी कामदार खोज्छ । यस्तो समयमा नेपालबाट चाहिँ अदक्ष कामदार मात्रै आइरहेका छन् ।
त्यसरी पठाइरहँदा उनीहरुलाई सुरुबाटै समस्या हुन थाल्दछ । आज त्यसैको एउटा कारण खाडीका देशमा रहेका केहि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनी आफ्ना असिमीत सपनाहरु पूरा गर्न र सम्पत्ति कमाउने ध्यानमा अवैधानिक र यहाँको नियम कानुन बिपरितका विभिन्न खाले गलत क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन ।
फलस्वरूप कोही जेलमा पुगेका छन त कसैले आत्माहत्यासम्म पनि गरेका छन् । यस्ता अनपेक्षित घटना तथा दुर्घटनालाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले जति सक्दा छिटो ध्यान दिनु जरुरी छ ।
नेपालबाट पठाउँदा नेपालीहरुलाई एक हजार दिर्हाम र दुई सय दिर्हाम थप भनेर पठाइएको हुन्छ । तर उनीहरुसँग सीप नभएकाले धेरै नेपाली ४ सय दिर्हाममै काम गर्न बाध्य छन् । त्यसैले कागजमा लेखिने कुरा यथार्थमा परिणत गर्न जरुरी छ ।
यहाँ आइसकेपछि फर्किन गाह्रो छ । त्यसैले अरबमा श्रम बेच्न आउनु अघि नै आउनेहरुले आफ्नो कार्यक्षमताका बारेमा धेरै सोच्नु जरुरी छ । सरकारले म्यानपावर वयवसायी मार्फत आएका सबै नेपाली कामदारहरुले पाउने सेवा सुबिधा फरक नपर्ने किसिमको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्नु पर्छ ।
श्रम मैत्री व्यवस्थाका लागि विशेष रुपमा ध्यान दिनै पर्छ चाहे त्यो नेपाल सरकारको सन्दर्भमा होस या अरब सरकारको सन्दर्भमा ।
साउदीमा मेरो तलब हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भन्दा धेरै छ
असोज २२, २०७५ सोमबार
उपहारमा परेको ४४ लाखले नेपालमै व्यवसाय गर्न दसैँमा घर फर्किन्छु
साउन ११, २०७५ शुक्रबार
‘श्रीमानले विदेशमा कमाएको किन बचेन भनेर बल्ल बुझेँ’
करिडोर निर्माणमा जनप्रतिनिधिदेखि प्रशासनसम्मको मिलेमताे: थापा
नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्न विश्व समुदायलाई प्रम ओलीकाे आग्रह
अष्ट्रेलियाविरुद्ध सिरिज जितेपछि भारतीय खेलाडी छनोट समितिका ...
सभामुखले भने - माननीय सदस्य ज्यूहरुले गल्ती गर्नुभयो
उपत्यकाको गाडी भाडा समायोजन गर्ने विभागकाे तयारी
कस्को छेउ सर्न खोज्दैछिन् प्रियंका ?
क्याप्टेनमा नेपालको फुटबलको कथावस्तु रहेको छ: भुवन केसी
तालिबान आतंककारीले काबुलमा गरेकाे हमलामा ७० जनाको मृत्यु, ...
गोंगबुमा गाेली चल्याे, एक जना घाइते
भूकम्प पीडित अनुदान रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न नसकिँदैन...
नेपाली महिला टाेलीले साफअगावै भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगि...
अत्तरियामा शनिबार भएकाे युवक हत्याका थप तीन आराेपित पक्राउ
कांग्रेसको निरन्तरको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबा...
इँटा भट्टाकाे खाडलमा डुबेर बालकको ज्यान गयाे
आमलाले तोडे विराट कोहलीको रेकर्ड: सबैभन्दा कम इनिङमा २७ शतक बनाए